Isixazululo se-GOLD: Ithuluzi Lokubonakala lezinkampani namabhizinisi
GOLA FOLA WEB SOLUTION
Ukunikezwa kweWebhu okuphelele ngokuphelele okuke kwabonwa e-Italy
La Isixazululo segolide yakhelwe njengengokoqobo Mini-Isiza, eyodwa iwebhusayithi yakhelwe ukuheha ilukuluku labasebenzisi futhi, ngaphezu kwakho konke, intshisekelo ye Injini yokusesha.
Uma usunayo iwebhusayithi: khuphula ukuvakasha futhi ukhulise ukuthandwa ngokwenza kwaziwe ngabasebenzisi abaningi
Uma ungenayo iwebhusayithi yakho: yisisombululo esihle kakhulu sokuthola inkampani yakho online ngokushesha
Isevisi yokubonakala ebonakalayo yohlobo lwayo
Yaziswa futhi yanconywa yizinkampani zase-Italy ezingaphezu kuka-4000
La Igolide Umbukiso Wegolide ichazwe ngendlela ecophelelayo nebukhali yokubonisa eyakho ngendlela ehehayo nehehayo umsebenzi wobungcweti kanye nohlobo lwezinsizakalo ozinikezayo.
Owethu Umbukiso wegolide kubhekiswe kubo izinkampani, imisebenzi yezentengiso, amabhizinisi amancane naphakathi nezakhiwo zazo zonke izinhlobo nosayizi. Ngayinye yezakhi zayo, eyombhalo kanye ne-multimedia, isetshenziswa kahle ukukhulisa amandla webhizinisi lakho, amakhono akho, amakhono namakhono.
Noma ngabe yimuphi umkhakha webhizinisi inkampani yakho noma ibhizinisi lakho elingelakhe Umbukiso wegolide izokwazi ukuyithuthukisa futhi izokwazi ukuyikhulisa kahle ukuyibeka ku Injini yokuseshaikakhulukazi -Google, okuchofozwe kakhulu ngabasebenzisi.
L'nokwenza kahle SEO eqinisweni, yi-workhorse yethu enkulu kunazo zonke: imibukiso yethu yenziwe kahle ngazo zonke izindlela ukuqinisekisa ukuthi uyatholakala Injini yokusesha njalo lapho abasebenzisi bafuna imisebenzi efana neyakho.
Ungaba kanjani ne-Mini-Site
Amakhasimende afuna I-GOOGLE ukuthayipha igama eliyisihluthulelo efanele ibhizinisi lakho. Ngale ndlela, bakuthola kalula futhi bakufinyelele ngokuchofoza kumphumela okukukhathazayo. Ngaleyo ndlela bazothola enhle "Ikhasi Le-Web Ephelele Lakho Konke" okukunikeza ngendlela esebenzayo ne-multimedia futhi kuyokuvumela ukuthi uthintwe ngendlela ezisebenzayo neziqondile.
Iqembu leTrovaWeb izokuxoxisa futhi, ngokuhambisana nezidingo zakho zokubonakala, izothola isisombululo sokubeka kahle Injini yokusesha yamagama abalulekile abasebenzisi abasesha kakhulu endaweni nangaphaya, efanele ibhizinisi lakho futhi lokho kungakusiza uthole ukuhola okuningi.
Ithimba leTrovaWeb lizobhala umbhalo ngamagama asemqoka okuvunyelwene ngawo ku-inkhulumoluhlolo futhi ngizoyithuthukisa nge Amasu we-SEO ukukunika Ukubonakala Okuphezulu kuseshwa kwaBasebenzisi Injini yokusesha nokwethula ibhizinisi lakho ngokusemandleni nasemikhiqizweni nasemisebenzini yakho ngendlela esezingeni elifanele.
Isistimu Yeselula Ephendulayo ne-AMP
La tua Umbukiso wemultimedia ezingokoqobo nenhle con Thola i-Web Gold ingabukwa kunoma yiluphi uhlobo lwedivayisi ngaphandle kwesidingo se-APP sokulanda. Eqinisweni, umsebenzisi ofika ku-Showcase yakho angabheka nayo ekuhambeni I-Smartphone ne-Tablet ngenxa yobuchwepheshe Iselula Ephendulayo e AMP futhi angaxhumana nawe ngokuchofoza oxhumana nabo.
Isimo Somhumushi Ophindwe Kabili
Ngenxa yesistimu yokuqamba kanye neyodwa I-Community FreeLance etholakala ezingxenyeni ezahlukene zomhlaba TrovaWeb ubamba iqhaza a Uhlelo Lokuhumusha Oluningi Lobuchwepheshe futhi ucebile kakhulu ngamazwi. UMBONO WAKHO OBONAKALAYO uzobe uhunyushwa ngokuzenzakalelayo ku Izilimi eziyi-14 futhi kukhonjiswe ku-Injini Yokucinga ye Izikhathi ze-14 ulimi ngezilimi, ukwandisa okwakho Ukubonakala nangaphesheya.
Izivakashi eziza embukisweni wakho noma kumakhasimende wakho zizoba nethuba lokuvotela ezakho Inkampani - Umkhiqizo - Service ngezinkanyezi eziphakeme ngokushesha ekubuyekezweni. Lezi zinkanyezi namavoti esewonke asevele azobonakala kwimiphumela yosesho ye-GOOGLE ngenkathi abasebenzisi besesha, sibonga ubuchwepheshe beMarkup futhi lokhu kuzuzisa ukubonakala kombukiso wakho oku-inthanethi
Ithimba leTrovaWeb lizoxhuma i-Messenger yakho ngqo Ikhasi le-Facebook nge-TrovaWeb Showcase yakho ukuze Izivakashi zikwazi ukuxhumana nawe ngqo ngokuchofoza inkinobho elula uma isetshenziswa smartphone izovula uhlelo ngqo I-Facebook Messenger
Spin the I-Online Online yakho kubaluleke kakhulu ukuqashelwa nokugqama kwabanye. Ithimba leTrovaWeb lizofaka ifayela le- Logo Yenkampani elungiselelwe ngokukhethekile i-Show Show. Ukuzithanda NON unayo noma uyayifuna QAPHELA isithombe sakho TEAM izothuthukisa UNO ngokukhethekile kuwe ngokuphelele NEW.
Oxhumana nabo Thenga, Wendawo o inkampani bayohlala bekuchofoza nje kubo bonke abasebenzisi abavakashela okwakho Umbukiso wegolide ngocwaningo lwabo ku- I-GOOGLE. Bazokwazi ngokushesha ikheli lakho, Idolobha, i-Zip Code, Ucingo kanye ne-E-mail.
Amanethiwekhi Akho Womphakathi
Ku-TrovaWeb Showcase yakho, ezotholakala emiphumeleni yokucinga yabasebenzisi ku-Injini Yokucinga, bazofakwa ZONKE izixhumanisi eziholela Amanethiwekhi omphakathi athandwa kakhulu yakho Inkampani - Isitolo - Esekhaya. Abasebenzisi bangaxhumana nawe ngqo kusuka I-Smartphone ne-Tablet noma ukukulandela kuwo wonke amanethiwekhi omphakathi asungulwe kakhulu: Facebook, WhatsApp e yocingo.
Abasebenzisi abasesha I-GOOGLE zivame ukuba sendleleni, ku imoto - Isikhumulo sezindiza - ngezinyawo futhi badinga usizo kanye nokushesha. Kwakho Umbukiso obanzi I-GetWeb konke nje kukuchofoza nje: chofoza ku Isixhumanisi se-Navigator ukuvula iI-Google Amamephu APP kwiselula okuzokuqondisa ebhizinisini lakho ngokushesha futhi Ngaphandle kokuchitha isikhathi.
La tua Igolide Umbukiso Wegolide, iyasebenza futhi inhle, iphinda futhi ikutshele ukuthi ukubuka kwakho kubukezi kangaki Abasebenzisi abayibukayo beyithola ivuliwe Injini yokusesha. Umbukiso wokuthi Ithimba Le-GetWeb uzokwazi ukuthi nawe uhlinzekelwe Ukubuka okuphikisayo
Kufakiwe ekunikezelweni kweTrovaWeb GOLD ozonikezwa kukho imalimboleko yamahhala un Ngokwezifiso indawo yesizinda yesi-3 okubuye kwathayipha kuholela ngqo ku- Umbukiso Wakho I-FindWeb, ukuze ukwazi ukuyifaka kumaKhadi akho Ebhizinisi - Izincwajana - Amaflaya - Izitika zokuthuthukisa ezakho Ukuthengisa Ngendabuko: Ngokwesibonelo WWW.MIONEGOZIO.TROVAWEB.NET
Amahora nosuku lokuvala
Isixazululo GOLD ITrovaWeb nayo ifakwe imodyuli evumela izivakashi zakho ukuthi zazi ezakho Amathayimitha ukuvula nokuvala kanye Usuku lokuphumula lapho ibhizinisi lakho lihlala livaliwe khona.
Iklabhu ebekelwe izinkampani nabathengi
Shicilela Okunikezwayo - Izithombe - Amavidiyo - Izimemezelo - Imicimbi
Impumelelo yeTrovaWeb Services ilele Ukulula ukusetshenziswa ngu Abasebenzisi Abafuna imikhiqizo nezinsizakalo ku-Inthanethi futhi Besebenzisa iWindows yethu bathola Iphrezentheshini Muhle futhi ngokushesha esiza ukuxhumana nenkampani ngokubonga ukuba khona kwe Izinkinobho ze-Multimedia ngaso sonke isikhathi kusesimweni futhi kufanelekile ukusebenzisa, kokubili kusuka ku-Smartphone ngokubonga ekuqalisweni kwe-Google Instant nakuKhompyutha nakuThebhulethi.
Izinkampani ezisikhethayo zingakushicilela ngokukhululekile okuqukethwe nokunikelwayo ku- Ukwabelana Ngeqembu Ezibekelwe zona futhi uthintane nabathengi abaningi nabasebenzisi ababhalisiwe ku Community ubani osayinayo kushukunyiswa Kalula Imali kodwa futhi kungani Bayazuza ukweluleka abangane babo Imikhiqizo - Izinsizakalo nokunikezwa okutholakala ku-Club
Umbukiso wakho uzohumusha ngokuzenzakalela ezilimini eziyi-14.
sizokwenzela i-logo eyenzelwe wena yenkampani.
Ukuxhumana Kwangempela ngefoni, ingxoxo kanye ne-imeyili.
Amanethiwekhi omphakathi adume kakhulu ngokuchofoza nje.
Izikhathi Zokuvula Nokuvala:
Izinkomba ezicacile nezinembile ngamahora akho okuvula.
Uyokwazi kahle ukuthi bangaki abasebenzisi abavakashela i-Showcase yakho.
iphrezentheshini enhle nenhle izodonsela iGoogle nabasebenzisi.
Isixazululo sezindleko eziphansi saziswa kakhulu yizinkampani zase-Italy
Ingxoxo yesikhathi sangempela: wonke amanethiwekhi amakhulu ezenhlalo atholakala kuwe
Phakathi kwezinzuzo eziningi umuntu anazo Umbukiso wegolide, okwaziswa kakhulu ngokuqinisekile ubukhona bezinkinobho ezikuvumela xoxa ngesikhathi sangempela nge-Telegraph, Isilayezi neWhatsapp.
Izinkinobho ezi-3 ezisebenzayo ku-Showcase zizokuvumela ukuthi uthintane ngokushesha nanoma ngubani ofuna imininingwane ngezinsizakalo zakho nemikhiqizo. Ngaleyo ndlela uzoba nethuluzi lokuxhumana elilula, eliqondile futhi eliseduze.
Amakheli, Oxhumana Nabo Nemephu yokuzula ukutholakala ngokushesha
Ngaphakathi kwe Umbukiso wegolide, bakho bonke abakhona oxhumana nabo, kufaka phakathi ikheli, i-imeyili nenombolo yocingo ukuvumela izivakashi ze-Showcase yakho ukuthi zikuthole kalula. Ngaphezu kwalokho, kukhona inkinobho ye Qala Ukuzula ezizokhombisa indlela okufanele ithathwe yokufika kuwe kumamephu we -Google. Ukukuthola akukaze kube lula.
I-Club yethu ukwenza okungcono kwamandla weCorporate Sharing
Ngubani okhetha i- Isixazululo segolide inethuba elikhethekile lokukwazi ukufinyelela iTrovaweb Club!
I-Club ingumbuso obekelwe izinkampani ezihlanganyelwe ezifisa ukuzuza kukhono eliphelele le Ukwabelana Komphakathi. Ngenxa yeklabhu yethu, ungashicilela futhi wabelane ngendlela engenamkhawulo: izithombe, amavidiyo, okuthunyelwe, inhlolovo, amakhuphoni, izimemezelo, okunikezwayo nokuphromotha, futhi uthintane nezinkulungwane zezinye izinkampani kanye noxhumana nabo. Sizokunakekela ukubhaliswa kwakho futhi sikunikeze iziqinisekiso zokufinyelela. Ngemuva kwalokho ungangena ngemvume bese uqala ukuthokozela yonke imihlomulo ye Ukwabelana for the ukugcinwa amakhasimende. Ikilabhu yethu, empeleni, ifana nenethiwekhi yokuxhumana nomphakathi, kepha inikelwe izinkampani kuphela. Ngakho-ke uzothola ithuba lokuxhumana nawo wonke amakhasimende angaba khona futhi uwagcine ngendlela elula futhi esheshayo. I-Trovaweb Club izokuvumela ukuthi uzinikele ku ukugcinwa amakhasimende ngokusebenzisa amathuluzi alula futhi asebenzayo kakhulu.
Isixazululo se-GOLD - Ukwabelana ngeqembu kufakiwe
Ukuvuselelwa kusuka ngonyaka olandelayo € 99 VAT KUFakiwe
Akunanhlawulo uma kukhanselwa
Wanelisekile noma Uyabuyiselwa
€ 599,00 VAT kufakiwe